ရာသီတုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးကို ဘာလို့ နှစ်စဥ်ထိုးနှံသင့်တာလဲ… -
အခုလတ်တလော လူတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေကြတဲ့ ရာသီတုပ်ကွေး က Influenza virus ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ ရာသီအကူးအပြောင်းကာလတွေမှာ အဖြစ်များကြပါတယ်။ တချို့လူတွေကတော့ နှာစီး ချောင်းဆိုး ဖျားနာ စတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ပြန်ကောင်းတတ်ပေမယ့် အချို့မှာတော့ ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် ဆေးရုံတက်ရတာ၊ အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေ ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်တတ်ကြပြီး လူပေါင်းသန်းတစ်ရာနီးပါး ဆေးရုံတင်ရကာ ခန့်မှန်းခြေလူနာအရေအတွက် ဆယ်သန်းကနေ သန်းတစ်ရာလောက်ထိ ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။
ဒါဆို ရာသီတုပ်ကွေး ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ?
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ နှစ်စဥ် ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကိုလဲ ကြောက်နေရဆဲမို့ အရင်တုန်းကလိုမျိုး mask တပ်၊ လက်ဆေးပြီး၊ လူစုလူဝေးရှောင်ရပါမယ်။
• ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ၂ပတ်နောက်ပိုင်းမှာ influenza ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ပဋိဇီဝပစ္စည်းများကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ထုတ်ပေးအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
•ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရာသီတုပ်ကွေး ကူးစက်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းသွားပြီး ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် ဆေးရုံတက်ရနှုန်းနဲ့ သေဆုံးနှုန်းကိုလဲ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားလူတွေမှာ ဖျားနာတာမျိုးတွေ ရှိလာရင်လဲ ရောဂါဆိုးရွားနိုင်နှုန်းတွေကို လျော့နည်းစေနိုင်တယ်ဆိုပြီး သုတေသနပညာရှင်တွေက လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။
တကယ်ပဲ ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကို နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းထိုးဖို့လိုအပ်တာလား?
နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းဟာ အချိန်ကြာလေ အားလျော့လာလေပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ၁နှစ်တခါ ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဟာ တုပ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ကတော့ ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေကလွဲလို့ အသက် ၆လနှင့်အထက် သူတွေကို နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းထိုးနှံဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံချင်တယ်ဆိုရင် HOPE TeleCare Myanmar Page ရဲ့ CB မှာ လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE မှ ဆရာဝန်တွေကို မနက် ၈နာရီမှ ည ၁၀နာရီအတွင်း အခမဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်..
ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး #ရာသီတုပ်ကွေး #ကာကွယ်ဆေး
Nov 22, 2021 Health Tips